တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: essay 5
Posted by မေဓာဝီ at 6:05 AM
မမေဓာ။ ဒီစာလေးကို ဖတ်ဘူးတယ်။ မမေဓာရေးတာမှန်း မသိဘူး။ ဖတ်ပြီး အများကြီးတွေးတော ငေးမောသွားစေတဲ့အက်ဆေးလေးပေါ့ဗျာ။
မမေခွင့်ပြုပါတယ် .. အိ ..ရေ .. ။
11/16/2006 7:26 AM
ဟုတ်တယ်မမေ တကယ့်ဘ၀မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်လို့ မှားသွားတာတွေ၊ သေချားမစဉ်းစားမိလိုက်လို့ မှားသွားတာတွေဟာ ပြန်ပြင်လို့မရဘူး Undo သာတကယ်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင် ကလေးဘ၀က ပြန်စလိုက်ချင်ပါတယ်....
ama, i admire u more and more.
u've good idea.
မနေ့ ညက “ကျွန်တော့်ကို အမြင်ကတ်ရသော အကြောင်းများ " တက်ဂ်ပိုစ့်လေးတစ်ခု ရေးရင်း ဒီအတွေးကို တွေးခဲ့မိတယ် ဒီနေ့ တော့ အံကျပဲ ကျွန်တော်လည်း ဥာဏ်ရှေ့ သွားခြင်း အလျင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဗျာ ဒီတော့ အမှားတွေမှ တသီကြီးပဲ တစ်ခါတစ်လေ တော်တော်ရှက်မိတယ် .... အဓိက ကတော့ ပါးစပ်ပေါ့အစ်မရာ .... တုန့် ပြန် မှုတွေက မြန်လွန်းနေတယ် ဝေဖန်မှုတွေက စောလွန်းနေတယ် .... မှားပြီဟေ့ဆိုတာ သိတော့ Undo လုပ်မရတော့ဘူး လွန်သွားပြီ တော်တော်ကလေးကို သတိထားနေရပါတယ် အရင်ကတော့ ကိုယ့်အပေါ် အမြင်မကြည်တဲ့သူတွေကို စိတ် ထဲ ကနေ မကျေနပ်မိတာအမှန်ပဲ ခုတော့ ကိုယ်ကမှ မကောင်းတာဆိုတော့ အမြင်ကတ် တာတောင်းနည်းနေသေးတယ် လို့တွေးမိတယ် .... ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ကျွန်တော့် အကျင့်ဆိုးကို တစ်ကြိမ်မက ထပ်ပြီး ရိုက်ပုတ်နှိပ်ကွပ်လိုက်ဦးမယ် အစ်မမေ .... မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တစ်ဆယ့် ရှစ်ပါးသော အာဝေဏိက ဂုဏ်တော်တွေကို တော့ အမြဲထာဝရ ကြည်ညိုသဒ္ဓါပွားနေမိပါတယ် ကြည်ညိုလို့ လည်း မဆုံးနိုင်ပါဘူး